❤️I-Decovilla 12 acre prive pool Villa,eduze ne-SHA Yoga - I-Airbnb
❤️I-Decovilla 12 acre prive pool Villa,eduze ne-SHA Yoga
Thondamuthur, Tamil Nadu, i-India
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Dr. Dinesh
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Nov 6.
Jabulela ukuhlala epulazini,
i-Tender Coconut Farm CLose to City KUDE nesiphithiphithi sedolobha.
I-Lush Sprawling grasss Foot Hills
I-air Idle ehlanzekile yokuhlangana komndeni, imicimbi yezinkampani Luxury at it rugged best... Atlan DECO VILLA
Itholakala emagqumeni e-Western Ghats imizuzu embalwa nje ukusuka ku-Isha Yoga Center yikhaya lomndeni eliphenduke ipulazi le-Deco Villa.
Ibekwe phakathi kwama-acres angu-12 omhlaba, iningi lawo liyipulazi elingokwemvelo, i-Deco Villa inikeza amakamelo okulala amathathu amakhulu alungele ukushaywa wumoya okuthulile noma ukuhlangana kweqembu elincane lomndeni noma abangane kanye nendawo yokubhukuda yangasese, indawo yokudlala yezingane ehlukile enendawo yokubhukuda engcolile, I-alley ye-bowling yangasese, i-Trampoline nokunye okuningi.
I-Deco Villa iyingxenye ye-Ececic Stays, inkundla enikeza inethiwekhi ehleliwe yokuhlala futhi ithembisa izinga elijwayelekile lekhwalithi kuzo zonke izici kusukela ekuhlanzekeni nasezikhungweni kuya kumasevisi nokokuzithokozisa okunikezwayo.
Nakuba i-Deco Villa ikude ngemizuzu engu-20 ukusuka edolobheni lase-Coimbatore, indawo yokuhlala epulazini ethulile izwakala sengathi ikude kakhulu nesiphithiphithi sedolobha. I-Western Ghats inikeza indawo enhle engemuva, kuyilapho ipulazi elizungezile eline-coconut groves liyisibonelo esihle sezindawo ezivundile zombuso. Lungiselela ukushona kwelanga nokushona kwelanga nokuphakama kwelanga endlini kutuswa kakhulu.
Epulazini ungazama isandla sakho ekulimeni, ukulima izinkomo noma ngisho nokushayela i-tractor! Ipulazi likhiqiza izithako eziningi ezingena ekwenzeni izidlo lapha, kusukela kubisi nemifino kuya ngisho nenyama. Konke kungokwemvelo. Amakamelo lapha anefenisha yokugcina izinto ezilula nobuhle
engqondweni futhi amakamelo anefenisha yokhuni eqinile, kuhlanganise nama-wardrobes nemibhede evamile ezindlini zendabuko ze-Tamil. Ungabheka phambili ezinhlanganweni zangempela ze-idli-sambar-chutney zesidlo sasekuseni kanye nezidlo ezimnandi ze-Tamil zemifino kanye nezokungeyona i-vegetarian phakathi nezinye izidlo.
Isikhungo se-SHA Yoga siseduze futhi senza uhambo losuku olumnandi. Ama-Nilgiris anezindawo ezifana ne-Ooty, Conoor ne-Kotagiri ziqhele ngebanga elifushane, njengoba kunezindawo zokuvakashelwa zasemaphandleni ezifana ne-Pollachi. Ukuhlala okufushane e-Deco Villa kungaba ikhefu elidingwa kakhulu ku- Nilgiris-Pollachi circuit.
ubusuku obungu-7 e- Thondamuthur
Ibungazwe ngu-Dr. Dinesh